Izindlu ezincinci kwiBon Echo's Edge: Indlu encinci #1
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDean
UDean unezimvo eziyi-48 zezinye iindawo.
Iimbono ezimangalisayo zeMazinaw Lake. Yitya kwigumbi eliphambili / ikhitshi elinefriji, isitovu kunye nomatshini wekofu weKeurig. Indawo yokuhlala iindwendwe ezi-4, amagumbi amabini okulala, enye enebhedi enkulu, enye enebhedi ephindwe kabini. Ngaphandle, indawo yakho yepikiniki, ene-propane BBQ encinci. Umpompo wamanzi kwi-cottage u-UV uyahluzwa kwaye uyaphathwa. Coca izindlu zangasese ezineshawa kwisiza kwisakhiwo esahlukileyo, esinamanzi ashushu & abandayo, abalekayo, ekwabelwana ngawo nezinye iindlwana. (Ukusetyenziswa kosapho olunye ngexesha le-COVID) Ukudlula kosuku lwePaki yePhondo yaseBon Echo kuyafumaneka.
Silusapho olunosapho, indawo yokuya ekhefini ejolise kusapho. I-Cottages e-Bon Echo's Edge ifakwe kwindawo yangasese kunye neenyawo ze-350 ze-pristine, i-crystal ecacileyo, i-waterfront kwi-Lake yaseMazinaw emangalisayo. Sihamba nje ngemizuzu emihlanu ukuya eBon Echo Provincial Park kwaye sinepaki yosuku lokudlula ekhoyo ukuze siyiboleke. Singakunika kunye neendwendwe zakho indawo efanelekileyo yokuhlangana phakathi kwe-Ottawa neToronto, iKingston kunye nePembroke. Izinto zangoku kukuhamba ngemizuzu elishumi elinesihlanu ukuya eCloyne okanye eNorthbrook, eOntario. I-cottage nganye iza nendawo yayo yepikiniki kunye nemibono ye-panoramic yechibi. Sinephenyane, iikayaks, isikhephe esihamba ngeenyawo, indawo yokuqubha ebukekayo kunye nebhon yomlilo ejonge emanzini ukuze uyonwabele ehlotyeni. Ezi ndawo kwabelwana ngazo nezinye iindwendwe kwisiza. Ebusika, zipholele emlilweni kwiNkosana yethu ePhambili, betha iindledlana eziphathwayo zekhephu, hamba uyoloba emkhenkceni, okanye uzihlangule kwikhephu!
Uya kufuna imoto ukuhamba. Kukho iindawo zokutyela ezimbalwa ezikufutshane. I-Bon Echo Provincial Park yimizuzu emihlanu xa uqhuba. Ukutya kukuhamba ngemizuzu eyi-15. Kukho iziko lezonyango kunye nekhemesti, imizuzu engama-20 yokuqhuba. Lihle, lihle kakhulu, ilizwe lasekhaya.
As a mechanical engineer, I work as a senior business analyst with the Department of National Defense, specializing in process optimization. You'll likely find me fishing off the dock or on my boat.
Sisoloko silapha kwaye siyavuya ukunceda! I-ofisi yokurenta imi ngaphaya kwendlela. Nceda uhloniphe umgama wokuhlala kunye nezinye iindwendwe kwindawo xa ukwindawo ekwabelwana ngazo.